Myanmar Teleport က ကြေငြာလိုက်ပြန်ပြီ.. - MYSTERY ZILLION
Myanmar Teleport က ကြေငြာလိုက်ပြန်ပြီ..
March 2009 edited April 2009 in Tech News
Myanmar Teleport က ထပ်မံ ကြေငြာလိုက်ပြန်ပါပြီ. ..
( April ၁ ) ရက် နေ့အထိ Connection ထပ်ကျမည်တဲ့.... (:((:((
:d:dမငိုပါနဲကွယ်..တိတ်တော့နော်..ကြောင်လေးကိုက်လိမ့်မယ်..ဟဲ..ဟဲ..နောက်တာ..ဧပြီလ ၁ရက်ဆိုတော့လည်း ၁ရက်ပေါ့ကွယ်..ဘာတက်နိုင်မှာလဲ..တက်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်...နိုင်ငံခြားသွားဖိုပဲ..ဒါမှ ဒီဒုက္ခတွေက ကင်းေ၀းမှာလေ..ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား:39::39:
အဲဒီ သတင်းတင်ထားတဲ့ site link လေး ပြောပြပေးပါလား Bro.
တရား၀င် site ကိုပြောတာပါခင်ဗျာ ...
အဲဒီမှာပါ အကိုရေ ... :14:
အဲဒီမှာလဲ greyfindor က screenshot လေးတင်ထားပါတယ်
မတရားဘူးဗျာ။ MPT India Line (203.81.72.200) တွေရတယ်ဗျာ။ နည်းနည်းနှေးတာကလွဲလို့ သုံးလို့ရတယ်။ Bagan Net (Myanmar Teleport) တွေပဲ ကျတာဗျ။ ကျတာမှ တော်တော်လေးကို ကျတာ။ ၁၁ နာရီ ကနေ ညနေ ၅ နာရီ ထိက ဘာမှသုံးလို့ကို မရတာ။ GTalk ဝင်လည်း connecting တဲ့၊ GMail ဝင်လည်း Network Timeout, Failed to Connect တဲ့။ ISP ချင်းအတူတူ ဘက်လိုက်ပြီး MPT လိုင်းယူတဲ့ လူတွေကျတော့ ရတယ်။ ကျရင် အကုန်ကျပေါ့။
so many reasons ... however, silence is golden. but alert everybody !! there may be ****** beyond it ....
it maketh me crazy
ကေဘယ်ကြိုးကရေအောက်မှာ ထားတော့ပုဇွန်ကို်က်တာ မွဇာကိုကြဲနေပြီ။အဲဒါကို ပုဂံကကောင်တွေသိ
တော့ရေငုပ်ပြင်တာ ဖင်ကိုငါးတွတ်လို.တဲ့ နှစ်ယောက်လောက်ကို ဆေးရုံပို.ထားလိုက်ရတယ်လို.ကြား
အရင်ကလည်း ကျနေတာပါပဲ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး....
ဒါကြောင့် သိပ်မဆန်းဘူးလို့ ပြောရမယ်......
ကျွန်တော် ယနေ ့(၂၇.၀၃.၂၀၀၉) နေ ့လည် ၃း၀၀ နာရီလောက်မှာ Download ဆွဲတာ ရလိုက်ပါတယ် IE8 ကိုဆွဲတာ ၁၅ မိနစ်နဲ ့ပြီးသွားပါတယ်။ အဲ ့Download Accelerator နဲ ့နော် တော်တော်မြန်တယ် Web site တွေ ဖွင့်ရတာတော ့နဲနဲ တော ့လေးသေးတယ်ဗျ။ \_:D/\_:D/\_:D/
ဟုတ်လည်းဟုတ်ပဲနဲ့ .. ..
ဟိုနေ့ကလည်း.. တစ်နေကုန် (လုံး၀) ကို ကျနေတာ.. ညနေလောက်မှ တက်လာတယ်..
ငိုတောင်ငိုချင်တယ်.. ရင်တမမနဲ့ .. သေချင်တာပဲ (:((
နက်ဖြန် connection တကယ်ပဲကောင်းမှာလား ဒါမှမဟုတ် customer တွေကို
April fool ဆိုပြီးကြည်စားတာပဲပြောမှာလား ရင်ခုန်ရင်းစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်
:14:လုပ်ကြပါအုံး အရပ်ကတို့ရေ ဧပြီ ၃ရက်နေ့ မှပီးမယ်တဲ့ (:((:((
ပြင်နေတာလား။ ကစားနေတာလား မသိဘူး။ xxx
Deadline (Due date) ကို မီအောင် မလုပ်နိုင်တာ ဒို့မြန်မာတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါပဲ။ ၂၅ ရက် ကနေ ၁ ရက်နေ့။ ခုဆို ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃ ရက်နေ့ထိ။ နောက်ဘယ်ထိထပ်ရွှေ့ဦးမလဲ မသိဘူး။ အပြောနဲ့အလုပ် ထပ်တူကျအောင် လုပ်မှ တိုးတက်မှာပါ။ အခုတော့ အပြောတခြား အလုပ်တခြား ဖြစ်နေပါပြီ။
ပထမတစ်ခါပြောတော့ (၂၅)၇က်နေ့ ပြီးမယ်တဲ့။
နောက်တော့ ဧပြီ (၁)၇က်နေ့တဲ့။
ဒီတစ်ခါကျတော့ ဧပြီ(၃)၇က်နေ့မှာ ပြီးမယ်တဲ့။
(၃)ခါလောက် လိမ်ထားပြီဆိုတော့ ယုံတော့ဘူး
ုဘယ်တော့မှ ပြီးပြီး သူတို့ပေးမှရမှာဆိုတော့လည်း စောင့်နေယုံဘဲလေ။
ဒီလိုလေဘဲနေတော့မယ်ကွယ် ထပ်ပြီးတော့ စိတ်မညစ်ချင်တော့ဘူး :65: :65: :65:
ဒီတစ်သက်ကော ပြင်လို့ပြီးမှပြီးပါ့မလားမသိဘူး.. တစ်ချိန်လုံးပြင်နေရတာ.. သူတို့ကော မမောဘူးလားမသိဘူး.. အကုန်လုံးလဲ ပိတ်တယ်.. ဟိုပိတ်ဒီပိတ်... ဖိုင်ရှဲတဲ့ဆိုက်ပါပိတ်တော့ xxxxx တော်ပြီ.. ဆက်ပြောရင် လက်သဘောတွေပါကုန်တော့မယ်...(လက်နဲ့ပြောရတာညောင်းလို့... :d)
"ပိတ်တာ၊ ပိတ်တာ၊ ပိတ်တာ" တွေ။ တစ်ချိန်လုံးပဲ ပိတ်နေကြတာပဲ။ "ပိတ်တာ" တွေ တော်တော်များတာပဲ။
သေချာတာတော့ ပုဂံက april fool လုပ်သွားတာပဲဗျ ခုတစ်ခါ သုံးရက်နေ့တဲ့ဗျာ ပြောင်းပဲပြောင်းနိုင်လွန်းတယ်။ ခုလိုမျိုးဖြစ်တော့ လစဉ်ကြေးလေးဘာလေးလျှော့မယ်မရှိဘူး။ အင်းဒါမျိုးမြန်မာပြည်မှာပဲရှိမယ်ထင်တယ်။
အေးဗျာ .. အခုတစ်ခါတော့ ပြီးချင်တဲ့ အချိန် ပြီးမယ်။ ပြီးချင်မှ လည်း ပြီးမယ် လို့ ထပ်ပြောပြန်ပြီ စိတ်လေတယ် ဗျာ .. :105::111:
ဒီတစ်ခေါက်တော့ တော်တော်ကိုလွန်သွားပြီ။ တော်တော်ကိုမိုက်ရိုင်းတာဗျ။ ၃ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းပြီးချင်တဲ့အချိန်ပြီးမယ်တဲ့။ လွန်လွန်းအားကြီးတယ်ဗျာ။ တကယ်ပြင်တယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်ရက်ပြီးမလဲဆိုတာ မသိစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ လွန်ရောကျွံရော နောက်ကျ တစ်ရက်နှစ်ရက်ပေါ့။ အခုဟာက သူတို့မှန်းတဲ့ ၂၆ ရက်နေ့ နောက် ၁ရက်နေ့ နောက် ၃ရက်နေ့ .......... ပြင်မနေပါတော့နဲ့ဗျာ။ သုံးတဲ့သူတွေ ခင်ဗျားတို့ကိုပေးမသုံးတော့ဘူးလို့သာပြောလိုက်ပါတော့ဗျာ ..
ဘာတတ်နိုင်မှာလည်းဗျာ.. ဒါပေမယ့် ကျွှန်တော်ကတော့... အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပြီ...
သာမန်အင်တာနတ်သုံးသူတွေအတွက် ပြသနာသိပ်မရှိဘူးထင်ရပေမယ့်.. နေ့စဉ်.. pfingo , vzo, skype, gtalk voice chat စတာတွေ မဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေ (ဥပမာ ကျွှန်တော် :P)အတွက်ကတော့... အကြီးအကျယ်.ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာ... :2:
ကြံဖန်တာလည်း နည်းလမ်းစုံသွားပြီ... အဆင်ပြေတာ ဘာမှမရှိဘူး... website တောင်အနိုင်နိုင်ဖွင့်နေရတာကို... ရိုးရိုးချက်တင်တစ်ခုပဲ ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်လေ... ဒါပေမယ့်လည်း.... ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဗျာ... ဟိုသီချင်းလိုပေါ့ဗျာ...
ပါးစပ်ပိတ်.. ကြိတ်မှိတ်... ငါနားလည်ပေးမယ်....
မြန်မာနိုင်ငံတွင် internet access အား unlimited bandwidth ဖြင့်
သာမန်အင်တာနတ်သုံးသူတွေအတွက် ပြသနာသိပ်မရှိဘူးထင်ရပေမယ့်.. နေ့စဉ်.. Pfingo , vzo, skype, gtalk voice chat စတာတွေ မဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေ (ဥပမာ ကျွှန်တော် )အတွက်ကတော့... အကြီးအကျယ်.ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာ... :2:
ပါးစပ်ပိတ်.. ကြိတ်မှိတ်... ငါနားလည်ပေးမယ်.... :d
တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်ကတောင်မှ ရက်ပေါင်းတစ်ထောင့်တစ်ည ပြည့်သွားရင် ပြီးချင်ပြီးသွားအုန်းမယ်. . .
Mpt ရဲ့ ကြော်ငြာချက်တွေကတော့ ကုန်မယ်မထင်တော့ပါဘူးဗျာ ။
မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါခင်ဗျာ.. မြန်မာပြည်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်သော ချက်တင်ယူဇာများအတွက်ပါ.. အဲ ဒါပေမယ့်သူတို့ကတော့ ဒီဆိုက်ဒ်ကို သိတောင်သိမယ်မထင် ကျူလို့ရပြီးရော..ဒီကော်နဲ့က အဆင်ပြေတယ်လေ.. သူတို့အတွက်များသီးသန့်လုပ်ပေးလေသလား အမ်ပီတီရယ်... တော်တော်လေးတော့လွန်နေပါပြီ.. ပြီးချင်ပြီးမယ်.. မပြီးချင်မပြီးဘူးဆိုရင်.. ကျွန်တော်တို့လဲ သုံးချင်သုံးမယ် မသုံးချင် မသုံးဘူးပေါ့.. ( တော်ပြီ... ဆက်ပြောရင်............................ဟင်း.......
အခုအချိန်မှာတော့... ဘယ်ရက် Internet Connection ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့..
ဒီနေ့တော့ နှေးနှေး နှေးနှေးနဲ့ သုံးလို့နည်းနည်းလေးရတယ်..
ပြင်တာ တစ်လလောက်ကြာသွားလို့ တစ်လစာလစဉ်ကြေးမယူတော့ဘူးဆိုလည်းကောင်းသား.. :d
ဒါမျိုးကတော့ ဘယ်လာလိမ့်မလဲဗျာ..... :71:
၇ရက်နေ့ပီးမယ်တဲ့ ထပ်ကြေငြာတယ် ဒီတခါတော့မနက် ၄ခွဲပီးမယ်တဲ့ အချိန်တွေဘာတွေထည့်ကြေငြာလို့ ):)):P
(၇) ရက်နေ့ နံနက် (၄) နာရီခွဲ ပြီးမယ်တဲ့။ Announcement အသစ် ထွက်လာပါတယ်။ အာလူးပေးတာတော့ မဟုတ်ပါစေနဲ့။
6 ရက်နေ့ ညပိုင်းလောက် တော့ စမ်းကြည့်ကြပါဦး။ ပြီးလောက်မယ်နဲ့တူပါတယ်:d:d:d။